Kedu ihe UID dara pụtara? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Uid ụlọ ahịa okpu - nkọwapụta zuru ezu
Uid ụlọ ahịa okpu - nkọwapụta zuru ezu
Kedu ihe UID dara pụtara?
.UIDFETCHnjehie:Nwere ike'tụtara data ahụ: Nke anjehie bụkpatara ahụhụ a maara nke ọma na mmemme IMAP nke sava email gị jiri. Nke a na-emetụta sava IMAP nke a maara dị ka sava email Zimbra.26 nwere ike 2020
Ọ dị mma nabata akụkụ asatọ nke Amex emulator zuru ezu ndu slashtutorial taa, anyị ga-elekwasị anya na iwu ka ị nwere ike ịhụ nke mbụ anyị ga-ekwu nke ntọlite ​​ee n'ihi na nke a bụ ntọala m ka anyị wee mepee nkata iji chekwaa igbe mgbe ị nọ na menu ị nwere ike iji ụzọ mgbapụ iji nweta ego 2 ọtụtụ oge ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịmepe igbe nkata enweghị ịtọ ya nke ọma ma ọ bụrụ na ọ nwere uche ebe a anyị nwere ya nke m ka anyị mepee egwu ọ bụla. anyị kwetara nke a site na eze nke 959 na nke m ebe a ma ọ bụrụ na anyị mee nke a ọzọ ma ọ bụrụ na ị kwalite elu ị nwere ike ịnweta usoro ikpeazụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịbanye m chọrọ ka nke a bụrụ eziokwu.
Yabụ ọ bụrụ na anyị nwere rm250 na nke a dị egwu ihe Snowbike anyị nwere ike iji arcade physics wee nwee pink / nwa gia dị iche na n'ezie anyị ga-agbanwe nkwụsi ike nke mere na nke a bụ wheel SnowWhite ka ị pụrụ ịhụ na enwetara m onwe m ugbu a agbanweela iji chefuo ph ysics na ihe niile anyị ga-akpọ nke a ziri ezi-nnwale-nnwale ụda ya mere, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị emepe ọzọ M gụrụ ntọala nke bụ iwu ka ị gụọ ntọala, iji gụọ ntọala ntọala N'ebe a, ọ laghachiri na ndabara m ma yabụ ọ bụrụ na anyị meghee egwuregwu ọhụrụ anyị ga-edozi nke ahụ oge ọzọ, oge ọzọ anyị ga-eme ya ọ dị mma ka anyị nwee / gwa oge igbu ọchụ ma ọ bụrụ na ị na-ele ya anya n'akụkụ aka ekpe ị pụrụ ịhụ na ọ dịghị oge anyị agaghị na-egosi na ngụkọta oge ngụkọta oge ngosi na-egosi gị oge otú oge ị dị nnọọ na a egwuregwu, omume rsteps nọmba asaa -88. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ihe dị mma n'ọsọ ahụ ị nwere ike icheta na n'oge a mgbe anyị na-ekwu okwu L Fps ị na-enweta okpokolo agba kwa nkeji ọ dị ka nke m bụ 58 59 60 ihe. Iwu ọzọ m ga - egosi gị bụ otu esi ele ndị anyị anya, ọ dị mma, yabụ ọ bụrụ na m gbalịa ịlaghachi ugbu a ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla na - eme, mana ọ bụrụ na anyị abanye Inslash Total anyị nwere ike ịgbanwe ndị dere, ọ bụrụ na anyị agwa nwoke a okwu ugbu a ọ bụ a nnukwu ụlọ egwu ndị na-emeghe ogwe aka ígwè ọrụ na- ga-ekwetaghị na anyị nwere ike ịgbanwee n'ọnọdụ na taabụ ka ịgbanwee onwe gị na njikwa ya aga bike na x-igwe kwụ otu ebe ị na-eji otú ịzọpụta a demo agwaetiti ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịzọpụta ihe ebe a ka anyị nwee ike ịme / aha ngosi na anyị ga-akpọ aha ule a.
Chọrọ free pịa enterit na-ekwu demon m emelitere aha ga-egosi ebe a dị ka onye na-akpọ ya 2 nke ga-abụ a ule email nke ga-free na ga-abụ na-egosi na-esote, ka na-amalite egwuregwu. Yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'ịntanetị ma ugbu a na-egwu egwu enweghị m igwu egwu na sava ngwaahịa ahụ, mana maka ịntanetị ị nwere ike iji akwa oyi akwa commalist, nke a bụ oghere 1 ID 77250, nke a bụ UID m wee chọọ UID n'ihi na otu ụbọchị chọrọ aha nke jasigates blah blah blahsom ihe anyi nwekwara ike serveretinye egwu ihe nkesa na egwu egwu ugbua ị ga - ahụ egwu na akaghị ma ọ bụrụ na ị na - agba ọsọ nke aka gị, ị nwere ike iji ihe nkesa setịpụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe ha, ọ ga - abụ maka oops, asụpe ezighi ezi ikike ekwetaghị n'ihi na enwere m ikike ime ya na sava a mana ee nke ahụ bụ igodo nkesa ma ị ga-enwerịrị nọmba a, eche m na m bụ onye na-agaghị ahụ onye ọ bụla ikpebi idobe onye ọkpụkpọ ahụ, mana onye a na - eme ntuli aka, nke ahụ apụla, ọ dị mma, yabụ na anyị nwere ụfọdụ iwu nke na - achụkwa nta, mana nke mbụ anyị ga - abanye n ’usoro onwe onye ị ga - aga ebe ị ga - ahụ nhazi zuru ezu ma ọ bụrụ na ụjọ na - atụ gị ị ga - ahụ na anyị nwere ule file ebe a dị ka a.
Na mgbakwunye na ngosi, anyị nwere ule ngosi otu abụọ na atọ, nke pụtara na ha ga-apụta na egwuregwu mgbe ị na-ele ụzọ mkpirisi nke dị na desktọpụ gị nke a na-atụkwasị na nke gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ị pịa aka nri iji họrọ nwere ike , họrọ Njirimara na mgbe ahụ i nwere ike tinye ụfọdụ n'ozuzu edoghi na iche na ọ bụrụ na ị gaa MX emulator forum ị ga-ahụ na izugbe ụka na ihe na-akpata na anyị nwere ụfọdụ Editor Hiddenpowers ebe a bụ eleghị anya ndị na ị na-eji na-Chọpụta nke tozọ iji soro ihe egwu egwu mmebi Frequency I h Anyị ejighị nke ọ bụla n'ime ndị a belụsọ hotes zoro ezo ka anyị wee chọọ onye editọ anyị ji - - ọ na - agbakwunye, ma ọ bụ nke pụtara na anyị na - akpọ nchịkọta akụkọ egwu na don ' Achọrọ m apapa n'ihi na anyị chọrọ ịme fim ole na ole ma lelee anya n'oge ahụ, mgbe ahụ anyị drankụrụ mmanya - - nye ha nke ahụ - mana anyị nwere ike kụọ ụlọ ahụ, anyị pịnye oghere n'etiti ihe ndị a n'etiti iwu ọ bụla - - o nwere ezigbo ihe, achọghị m nke ahụ dị ka sir zoro ezo 'agbarapụ ihe anyị weghara, ka anyị tuo ya na nke a kama dịkwa mma ọ bụ maka na emelitereghị ya ka ị wee hụ na nke a bụ onye ndezi na aga m egosi n'isiokwu ọzọ. Ọ bụ nnukwu aghụghọ ka nke ahụ wee bụrụ ihe akụ dị ka ọ dị, ọ dị ka ị maara na ọtụtụ mmadụ na-eche etu ọ dị na mgbe anyị kwụsịtụrụ egwuregwu ahụ ị nwere ike ịsị na enweghị nkwụsị. Ihe m mejọrọ ebe a bụ na anaghị m emelite ụzọ mkpirisi n'ihi na ị ga-anwale ọzọ ebe a ka ị nwee ike imelite ya n'ụzọ ụfọdụ ka ị kụrụ ya ozugbo ọ ga-adị mma naanị ịhụ anyị ka onye editọ na-arụ ọrụ ọzọ niile Ekwesiri m ime bụ imelite ụzọ mkpirisi a, oops, nke ahụ bụ maka akụkụ ahụ.
Na ọzọ akụkụ anyị ga-imelite egwuregwu na m ga-egosi gị otú ị na-eme ya, otú ahụ ka ị na-esonụ na nwunye
skype profaịlụ directory
Kedu ihe bụ UID nke ozi?
NaUIDbụ uru nke ihe nkesa IMAP na onye ahịa kwenyere na-egosipụta otuozi. Naozina-egosi na ma sava ma ọ bụ onye ahịa ahụ na-agbakọ ihe dị icheUIDmaka otu ihe ahụ.Bọchị 29 2012
Enwere ike itinye onye ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka banye na desktọọpụ mana ọ bụghị ngwaọrụ mkpanaka ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso ha gafee ngwaọrụ iji nweta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ziri ezi na akụkọ gị, ịnwere ike iji nchịkọta Google iji kpokọta NJ ndị ọrụ. Cheta na nchịkọta Google setịpụrụ ihe nchọpụta na-enweghị aha nke echekwara na kuki ihe nchọgharị iji mata ndị ọrụ pụrụ iche. Njirimara Njirimara Onye Ọrụ na-enye gị ohere ịkwụsị omume ndabara a ma kama kenye NJ gị na-enweghị aha site na usoro CRM ma ọ bụ nchekwa data ndị ahịa.
Iji melite ọrụ Njirimara Onye Ọrụ na Google Analytics, gaa na ngalaba 'Admin' wee họrọ akaụntụ na ihe onwunwe. N'okpuru Ngwongwo, pịa Ozi Ndepụta, wee pịa Njirimara Onye Ọrụ. Ihe mbụ ị ga - eme bụ nyochaa Iwu Njirimara Onye Ọrụ.
Nke a dị ezigbo mkpa ka ịchọrọ ijide n'aka na ị na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ gị ma na-agbaso 'Usoro Ojiji nke Google'. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịtọlite ​​njirimara onye ọrụ. Nchịkọta na-enye gị akara nke koodu ị nwere ike itinye na koodu nsuso gị ma hazie ya ka ị were NJ ndị ọrụ ị zitere.
Mgbe ị melite NJ ndị ọrụ wee gbanwee koodu nsuso gị, njirimara ID ị kwuru ga-etinye na nchịkọta maka ọ bụla kụrụ. Iji zere ọtụtụ NJ ndị ọrụ na-ekenye otu onye ọrụ, ịnwere ike iji 'nnọkọ nnọkọ' rụọ ọrụ. Nke a ga - ejikọ ID onye ọrụ yana hits ndị anakọtara n'otu oge tupu ekenye ID onye ọrụ.
Njikọ nke oge na-enye Google Analytics aka ka ọ kwekọọ na ụfọdụ hits natara tupu edobere njirimara onye ọrụ. Biko mara na nchịkọta naanị na-ekenye hits ndị anakọtara n'otu oge na nke a ga-abụ na nnọkọ izizi nke edobere njirimara onye ọrụ. Ọ dị mkpa ịmepụta nlele ID nke na -aza iji tinye naanị data nwere ọnya nke nwere njirimara ID njirimara.
Pịa Mepụta ka echiche a dị elu. Dịka usoro kachasị mma, ọ bụ ezigbo omume itinye okwu ahụ bụ 'Njirimara Onye Ọrụ' na aha iji mee ka echiche a dị iche. Nwere ike ịhọrọ mpaghara oge mkpesa wee pịa Mepụta Lee.
Rịba ama na Nlele Njirimara Onye Ọrụ enweghị ike ịgbanwe ya na Nlele Ọtọ na Nlele Ọhụụ enweghị ike ịgbanwe ya na Nlele Njirimara Onye Ọrụ. Naanị echiche ọhụrụ agbakwunyere na ihe onwunwe ejiri NJ Onye Ọrụ nwere ike ịkpọ dị ka echiche Njirimara Onye Ọrụ. Ihe nlere ID nke onye ọrụ nwere ihe omuma karia ihe nlere anya nke n’enweghi njiri aka Onye Njirimara, ma o nwere ike inye nghota di omimi banyere akuko bara uru nke ndi oru ndi debanyere na otutu ngwaọrụ ma na-emekorita ya na weebụsaịtị gi. Njirimara Njirimara, Nchịkọta Google na-agbakwụnye akụkọ mkpuchi Njirimara Onye Ọrụ.
Ọ na-agbakwụnye akụkọ cross-device na ngalaba ndị na-ege ntị ma gbanwee akụkọ Onye ọrụ Explorer. Ihe mkpuchi njirimara Onye ọrụ na-egosi pasent pasent nke okporo ụzọ gị nke ejiri njirimara NJ gị mee ihe. Mgbe ị na-ewepụta ụgwọ ọrụ iguzosi ike n'ihe ma ọ bụ ahụmịhe weebụsaịtị nke ahaziri iche, ị ga-achọ ịhụ pasent nke ịbanye na ụba na-abawanye oge.
I nwekwara ike ịmepụta ngalaba nke na-atụle ndị ọrụ ejirila na ndị ọrụ anaghị ekwenye ekwenye. Dịka ọmụmaatụ, Merlọ Ahịa Ahịa nke Google nwere ike ịmepụta ngalaba abụọ iji tụnyere ndị ọrụ ejirila yana ndị ọrụ anaghị enyocha. N'ihi na ezigbo ọrụ, họrọ ọnọdụ nke onye ọrụ NJ wee banye “kenyere” na ederede ubi.
Maka ndị ọrụ na-akwadoghị, tinye 'anaghị ekenye ya' na igbe ederede. Mgbe ahụ, anyị nwere ike itinye ngalaba ndị a na akụkọ Channels iji hụ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-akwadoghị na-eji ọwa nnweta ndị ọzọ karịa ndị ọrụ nyocha. Ozugbo anyị matara etu okporo ụzọ anyị si dị, anyị nwere ike ịlaghachi na njirimara Njirimara Onye ọrụ ma jiri akụkọ obe ngwaọrụ n'okpuru Ndị na-ege ntị iji hụ otu ndị ọrụ nyochara si eme ihe n'ofe ngwaọrụ.
Akuko mbu bu akuko Ngwaọrụ. Site na 'Ngwaọrụ' ị ga - ahụ ọtụtụ mmadụ elelela weebụsaịtị gị na desktọọpụ, mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka. Nwekwara ike ịhụ mmadụ ole na-eji weebụsaịtị karịrị otu enweta weebụsaịtị gị.
Ngwaọrụ reportzọ Akuko gosipụtara usoro nke edemede ngwaọrụ ejiri gosipụta ọdịnaya gị. Nke a na - enyere gị aka ịchọpụta usoro ndị ọrụ si agbanwe n'etiti ngwaọrụ. Nwere ike ịhọrọ gosipụta usoro tupu ma ọ bụ mgbe otu ụdị ngwaọrụ.
I nwekwara ike ilele uzo di iche iche dabere na onu ogugu ha. Ngwaọrụ ndị a nwere ike inyere gị aka ịghọta nsonaazụ nke ndị ọrụ na-agbanwe n'etiti ngwaọrụ. N'ikpeazụ, site na akụkọ a, ị nwere ike ịga na Ihe Ngwaọrụ Ngwaọrụ iji hụ aha ngwaọrụ ahụ.
Zọ a, ị nwere ike ịghọta omume onye ọrụ karịa ngwaọrụ niile. Capture Ngwaọrụ na-enyere gị aka ịhụ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-agagharị na ntụgharị n'ofe ọtụtụ ngwaọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọpụta na otu ndị ọrụ nwere mmasị na desktọọpụ desktọọpụ ahụla isiokwu dị na ya.
zụrụ mbadamba ụrọ na mbadamba. Nghọta a banyere omume onye ọrụ n'ofe ngwaọrụ nwere ike inyere gị aka ịkpụzi usoro ịzụ ahịa gị. Dịka ị pụrụ ịhụ, akụkọ NJ Onye ọrụ nwere ike inye gị nghọta maka akụkụ bara uru nke ndị ọrụ jiri obi ha niile mụọ weebụsaịtị gị na omume ya.
Esi tufuo wụnye okpu UID gbanwere?
Nọgidere na-enweta INSTALL_FAILED_UID_CHANGED, mana mgbe mwepụsịrị folda data ahụ, njehie ahụ pụọ. Gbanwee NgwaId nke ngwa ahụ. Rịọ njikọ a iji gbanwee ApplicationId. Mee ma wụnye ngwa ahụ. App ga-awunye nke ọma n'ihi na ọ na-emeso dị ka ọhụrụ ngwa. Ugbu a, wepụ ngwa a.
Kedu ihe nchọta UID dara na mperi nke ime pụtara?
Abanyela m njirisi ọchụchọ n'ime mpaghara ọchụchọ ma nata ozi njehie na-esonụ dị ka 'Ihe nkesa ozi zara: UID SEARCH dara'. Ihe ndekọ ahụ enweghị ike ịchọ otu ederede ma ọ bụ ahụ n'ime ozi ahụ. Jiri obiọma nye ndụmọdụ ọ bụla kwesịrị ekwesị maka idozi okwu a. ”
Kedu ihe kpatara ọhụụ ji aga n'ihu inweta njehie UID?
Nke a na-egosiputa ahụhụ ahụhụ Ihe omume gị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe nke a gasịrị. Emechiela m Outlook ugboro 20 ma njehie a na-abịaghachi. Enweghị m oghe na-emeghe n'otu oge m na-eji ele ihe anya. M ehichapụ wee megharia akaụntụ imap ahụ dịka isiokwu MS na-atụ aro ya ma nke a abaghị uru.
Kedu ihe UID pụtara na ozi dị na IMAP?
UID bụ uru nke ihe nkesa IMAP na ndị ahịa kwenyere na ịchọpụta otu ozi. Ozi ahụ na-egosi na ma sava ma ọ bụ onye ahịa ahụ na-agbakọ UID dị iche maka otu ihe ahụ.